गृहमन्त्री निधिको निशानामा परेका दाङका एसपीको सरुवा किन रोकियो ? – ZoomNP
गृहमन्त्री निधिको निशानामा परेका दाङका एसपीको सरुवा किन रोकियो ? प्रकाशित मिति: बुधवार, मंसिर ०८, २०७३ समय - १२:२१:५२ घोराही, ८ मंसिर । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको निशानामा परेको भनि सरुवाको ब्यापक हल्ला चलेका दाङका प्रहरी प्रमुख एसपी धिरज प्रताप सिंहले दाङमै जिम्मेवारी पाएका छन् ।
भर्खरै भएको ५२ एसपीको सरुवामा प्रहरी प्रधान कार्यालयले सिंहको सरुवा नगरी दाङमा नै थमौति गरेको हो । दाङमा पटक–पटक उनको सरुवाको हल्ला चलेको थियो । त्यो भने गलत सावित भएको छ । कार्य क्षमता, कार्य शैलिसंगै अपराध, गुन्डागर्दी, जुवातास नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले पछिल्लो पटकको सरुवामा उनलाई जिल्लामा नै थमौति गरी कुनै पनि प्रभावमा नपरी काम गर्न खटाएको छ । यसअघि उनी दाङमा काजमा आएका थिए ।
करिब तीन महिना काजमा बसेका एसपी सिंहलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले काजमा नराखी उनको जिल्लामा दरबन्दी कायम गरेको हो । उनी लागु औषध ब्युरोवाट सरुवा भई काजमा दाङ आएका हुन् ।
यसपूर्व हनुमान ढोका काठमाडौंमा डिएसपी भई लामो अनुभव संगालेका उनले पछिल्लो समयमा छिटफुट घटना बाहेक जिल्लाको शान्ति सुब्यवस्थामा उचित प्रबन्ध मिलाएका छन् ।
सरुवा थमौति भएपछि एसपी सिंहले आफू यसपूर्व काजमा रहेको र अहिले प्रहरी प्रधान कार्यालयवाट दाङमा नै पोष्टिङ गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आफ्नो कार्यकालमा जिल्लाको शान्ति सुरक्षा ब्यवस्था राम्रो बनाउन चाहेको र सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह गर्नु भएको छ ।
दाङमा अपराध, जुवातास, गुन्डागर्दि, वैदेशिक रोजगारीमा हुदै आएको ठगि लगायतका विभिन्न कुराहरुको नियन्त्रणका लागि कदम अघि बढाउदा जनता, पत्रकार, राजनितिक दल सबैवाट साथ, सहयोग, समर्थन पाएको भन्दै उहाले काम गर्नेक्रममा आउने चुनौति सामना गर्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । शान्ति सुरक्षाको सवालमा आफूले कसैसंग सम्झौता नगर्ने भन्दै दाङलाई सुरक्षित र ब्यवस्थित बनाउनु मुख्य कर्तब्य भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
म्यानपावर ब्यवसायीविरुद्ध अप्रेशन नै चलाएर चर्चामा आएका उनले जुवातास, अपराध, लागु औषध नियन्त्रण, मानवअधिकारको सम्मान, फरार अभियुक्तलाई पक्राउ, आर्थिक पारदर्शिता लगायतका कार्यलार्ई सांगठानिक कार्यक्रमकारुपमा अघि बढाएका छन् । आफ्ना कार्यकर्ता छुटाउन नपाएपछि यहाका राजनीतिक दलहरु असन्तुष्ट रहेको र उनको सरुवामा लागेको खबरहरुसमेत आएको थियो ।
जुवातासको विषयलाई लिएर कांग्रेसका केही नेताहरु गृहमन्त्रीकहाँ उनको सरुवामा लागेको गएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । यद्यपी, कांग्रेस नेताहरुले भने उनको सरुवाका विषयमा आफ्नो पार्टीको चासो नरहेको र आवश्यक परे सहयोग गर्ने स्पष्टिकरण दिइसकेका छन् ।
पछिल्लो समयमा विभिन्न अपराधमा संलग्न आफ्ना कार्यकर्ता छुटाउन नपाएपछि राजनीतिक दलका नेताहरु केही असन्तुष्ट रहेको बाहिर आउने गरेको छ । तर, दलहरुले भने यो कुरा स्विकार्न तयार छैनन् ।
सबै दलहरु एसपी सिंहले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सवालमा अघि बढाउने कदमा साथ, सहयोग र समर्थन रहेको बताउदै आएका छन् ।